झुमकी यात्रा सुरु हुने Kasthamandap Daily
झुमकी यात्रा सुरु हुने
काठमाडौं । सम्बलद्वारा मंगलबारदेखि आरम्भ हुने ‘झुमकी यात्रा ः महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त आवाज’ का लागि कलाकारहरूको एक टोली प्रदेश २ का लागि प्रस्थान गरेको छ । बलात्कार पीडित महिलाको कथामा आधारित पत्रकार अनिलकुमार कर्णको नाटक झुमकीको प्रदर्शन र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध जनमत निर्माणका लागि सो टोली मंगलबारदेखि प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा पुग्नेछ ।
प्रदेश २ जानुपूर्व सम्बल टोलीका सदस्यलाई पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्मान गर्दै महत्वपूर्ण र आवश्यक विषयमा जनमत निर्माण गर्न सम्बलको यात्रा सफल हुने कामना गरे ।
सडक नाटकको स्वरूपमा प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्मका विभिन्न १६ ठाउँमा प्रदर्शन हुने सो नाटकको प्रायोजन सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एडभान्स ग्रुपले गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रस्तुत नाटक हेरेपछि नेता निधिले झुमकीले अत्यन्त प्रभावशाली ढंगले सकारात्मक एवं सार्थक सन्देश दिने र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउने बताए ।
बलात्कार पीडित महिलाको पीडा, सकस र संघर्ष देखाइएको उक्त नाटक केही समयअघि काठमाडौंमा एकल नाटकका रूपमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
नाटकमा अभिनेत्रीहरू रिना रिमाल र पुनम ढकाल, गंगाकान्त झा, सबिन कट्टेल, सरस्वती अधिकारी, सगुन शर्मा आदिले अभिनय गर्ने यात्रा संयोजक लक्ष्मी चौधरीले बताइन् ।
यौन सम्पर्क शुरु हुनुअघि नै महिलालाई यसरी लाग्छ काउकुती
काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध ...
झरीमा तप्तप्, धुपमा हप्हप्, न गाँस न सुरक्षित बास
– राजकुमार पराजुली काभ्रेपलाञ्चोक । आजकाल बेतालमा आउने हुरीबतास र पानीले चन्द्रमाया ...
रानीमहल बचाउन आग्रह
–पवित्रा घिमिरे पाल्पा । ‘प्रेमको प्रतीक’ रानीमहलको संरक्षणलाई बचाउन आग्रह गरिएको छ ...
तस्वीरमा हेर्नुहोस् अस्तव् यस्त चाबहिल–जोरपाटी सडक
काठमाडौं । चाबहिल जोरपाटी सडक अस्तव्यस्त अवस्थामा गुज्रिएको छ । बढ्दो सवारी साधनको चाप र हालै ...
श्रीमती रिसाएर हैरान तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ ...
वादीले पेशा फेरे, समाजको हेराइ फेरिएन
–लक्ष्मी भण्डारी क्रान्तिलाई मैले सलाम गरिसकेंँ क्रान्तिले मलाई सलाम फर्काउन बाँकी नै छ ...
‘खतम बा ! गोड काटेके परै’
–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ । बाराको फेटा गाउँपालिका– ६ का ३३ वर्षीय मुनाफ अन्सारीको ...
एसइईमा सँगसँगै आमाछोरा
भक्तपुर – भक्तपुर दुवाकोटकी ५३ वर्षीया मीना आलेमगर आइतबारदेखि शुरु हुने माध्यामिक शिक्षा ...
२०७६ सालमा जम्मा १५ दिन सरकारी विदा
काठमाडौं । २०७६ सालमा सरकारले जम्मा १५ दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ । शुक्रबार राजपत्रमा सूचना ...
© 2021 All rights Reserved to Kasthamandapdaily.com